अटो शोमा राखिएको यो बाइक, जसको मुल्य सुन्दै जो कोहि पर्छ चकित - Kavre Online
काठमाडौं – भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा अटो शो २०१९ मा एमभी अगस्टाको एफ ४ मोडलको बाइकले धेरैको ध्यान तानेको छ । अन्य कुराका अतिरिक्त यसको मूल्यले समेत यसरी सबैको ध्यान खिच्न सफल भएको हो ।एमभी अगस्टा एफ ४ बाइकको मूल्य ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ । इटालियन कम्पनी एमभी अगस्टाको यो बाइकमा ९९८ सीसी इन्जिन क्षमता छ ।सो बाइकको इन्जिनले १९५ एचपी पावर र ११० एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । बाइकको तौल १९१ किलोग्राम छ र इन्धन ट्यांकी १७ लिटरको छ ।यस पटकको अटो शोमा राखिएको यो सबैभन्दा महंगो बाइक हो । नेपालमा भेलोसिटी प्रालिले एमभी अगस्टाका बाइक बिक्री–वितरण गरिरहेको छ ।नेपाल भित्रियो डुकाटीको इलेक्ट्रीक स्कुटर, यस्तो छ मूल्य र रेन्ज
काठमाडौं । नेपालका लागि आधिकारिक वितरक दीगो ग्रुपले नाडा अटोशोमा इलेक्ट्रीक स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले इलेक्ट्रीक स्कुटरको मूल्य ३ लाख ४८ हजार निर्धारण गरेको छ ।यूके बेस इलेक्ट्रिक स्कुटर निर्माता कम्पनी सुुपर सोकोसँगको सहकार्यमा डुकाटीले आफ्नो पहिलो स्कुटर निर्माण गरेको हो । डुकाटीले मोटोजिपी बाइक निर्माणमा समेत सुपर सोकोसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ।सुपर सोको सीयूएक्सलाई डुकाटीले आफ्नो थेममा इलेक्ट्रिक स्कुटर निर्माण गरेको हो ।
कम्पनीले सीयूएक्सलाई रातो र सेतो कलरमा पूर्ण डुकाटी थेममा ग्राफिक गरेको छ ।सीयूएक्स डुकाटीमा ३० एएच लिथिएम ब्याट्री दिइएको छ । यो ब्याट्री साढे ३ घन्टामा फुल चार्ज हुने कम्पनीले जनाएको छ । एक पटकको चार्जमा यो स्कुटरले ७५ किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छ । यसको टप स्पीड ४१ किलोमिटर प्रति घन्टा रहेको छ । यसमा १८० एमएमको रियर तथा फ्रन्ट डिस्क दिइएको छ । सीबीएस ब्रेकिङ सिस्टम रहेको यो स्कुटर १.८ मिटरमा पुर्ण रुपमा रोकिन सक्छ ।सीयूएक्स डुकाटीमा फुल एलइडी हेडल्याम्प, एचडी क्यामेरा, फुल डिजिटल कन्सोल, जी फोर्स सेन्सर, स्मार्ट फोन कनेक्टेड जस्ता अत्याधुनिक फिचरहरु रहेको छ ।
Prevबधाई! आइपिएस तालिममा नेपाल प्रहरी उत्कृष्ट, ‘सोर्ड अफ अनर’ उपाधि खड्कालाई
Nextभारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका भाइ टेम्पो चालक !
‘यो के पाराको बिरोध हो ? चर्चा पाउन त्यत्ती लफाडा गर्न पर्दैन हिम्मत भए क्रान्ति गर’रेखा थापा
आज बुधबार, बढ्यो कि घट्यो सुन-चाँदीको भाउ ? हेर्नुहोस्